Madaxweyne Joe Biden oo amaray Howlgalada Maraykanka ee Somaliya laga maamulo Aqalka Cad | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxweyne Joe Biden oo amaray Howlgalada Maraykanka ee Somaliya laga maamulo Aqalka...
Milatariga iyo Hay’adda Sirdoonka Mareykanka ayaa lagu wargeliyey in aysan ka fulin Karin howlgal dhanka cirka ama mid kumaandoos ah aagaga aysan ka jirin dagaaladda joogtada ah sidda Soomaaliya ayaga oo aan ogolaanshiyo ka haysan Aqalka Cad, sida ay daabacday New York Times.
Maamulka Joe Biden oo amarkaas u bixiyey si qarsoodi ah ayaa u soo rogay amarkan si loo xaqiijiyo waxyeeladda bad-qabka shacabka iyo la tuhunsaneyaasha ayaa lagu xusay warbixinta.
Talaabaddan ayaa u muuqata mid bilow u ah dib-u-qaabeyn uu maamulka Biden ku sameynayo shuruucda xukuumaddii Donald Trump oo u fasaxdey ciidamadda Mareykanka ay si madax-banaan u go’aansadaan howlgaladdaas.
New York Times oo soo xiganeysa mas’uuliyiin magacyadooda uga gaabsaday in aan loo ogoleyn in ay saxaafadda la hadlaan ayaa intaas ku dartay in maamulka Biden uu sidoo kale uu doonayo in uu hubiyo cidda lala beegsanayo howlgalka isla markaana lala soo wadaago fahfaahin qoraal ah iyo caddeyn muuqaal.
Nidaamkii Trump ayaa duqeymaha dhanka cirka ah gaar ahaan aagaga ka baxsan colaada wuxuu ku dabaqay siyaasad nuxurkeedu yahay dil ama qabasho, isaga oo si gaar ah Soomaaliya ugu shaabadeeyay in ay tahay “aag colaadeed”.
Sidda ay warisay shabakadda Airwars, maamulkii Trump ayaa afartii sano ee xukunka uu joogay wuxuu Soomaaliya ka fuliyey 276 howlgal oo isugu jiray duqeymo dhanka cirka ah iyo kuwa dhulka ah, iyadda oo taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika loona yaqaan AFRICOM uu kaliya xaqiijiyey 205 howlgal
Previous articleWasaaradda Caafimaadka Brazil oo sheegtay in saacadihii ugu danbeeyay ay dalkaasi xanuunka Karona ugu dhinteen dad gaaraya 1,910 ruux.
Next articleMaleeshiyaadka Xuutiyiinta Yemen oo bilaabay inay xir xirayaan Soomaalida doonaysa inay uga sii gudbaan Yemen dalka Scuudiga
Mahad salaad “heshiiskii shalay dhuroobe oo u dhashay dhagar qabana...
"Heshiiska doorasho ee shalay la saxiixay Dhuroobe ayaa u dhashay, Dhagarqabena waa ka dhintay!" Sidaas waxaa qoraalkiisa ku billaabay Xildhibaan Mahad Salaad oo ka...
Maraykanka Digniin ka soo saaray in Al-Shabaab Weerar ku qaadaan Diyaaradaha...